Ukuhamba kwaye uthanda ukuphefumla umoya omtsha? Apho ungayi khona
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBahrain Breaking » Ukuhamba kwaye uthanda ukuphefumla umoya omtsha? Apho ungayi khona
Iindaba zeBahrain Breaking • Iindaba ezizii-Bangladesh • Iindaba zeBhutan Breaking • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseCameroon • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zase-Egypt eziQhekezayo • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • Iindaba eziQhekezayo zase-Iraq • Iindaba eziseKiribati • Iindaba zeKuwait Breaking • Iindaba zaseLibya eziQhekezayo • Iindaba zaseMauritania eziQhekezayo • Iindaba zaseMyanmar • Iindaba zeNepal Breaking • Iindaba eziNtsha zaseNew Zealand • Iindaba zeNiger Breaking • Iindaba eziPhezulu zeOman • Iindaba zasePakistan • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • Xanduva • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Iindaba zeSolomon Islands eziQhekezayo • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zaseUganda • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ummandla we-Gulf unokuba yinkokeli yokuhamba kwezobugcisa kunye nokhenketho, kodwa unomgangatho omoya ombi kakhulu kwihlabathi. Njengenxalenye yomkhankaso woSuku loMhlaba kwizixeko eziluhlaza, i-Eco2Greetings ifuna ukuba umhlaba wamkele iindlela ezinje ngokujoyina uguquko lwelanga, ukukhetha izakhiwo eziluhlaza kugxilwe kumandla ahlaziyekayo, kunye nokuthatha isigqibo kwezinye iindlela zothutho njengebhayisekile okanye ibhasi ukuya ukunceda ukunciphisa ukukhutshwa okuyingozi.
Iidolophu ezinobungozi ikakhulu yingxaki eyenziwe ngumntu. Owona mthombo mkhulu we Izinto ezingcolisa umoya kukutshiswa kwezibaso ezifana namalahle nepetroli. Amafutha asefossil asetyenziselwa ukufudumeza, ukuqhuba izithuthi zothutho, ukuvelisa umbane, kunye nokwenza kunye nezinye iinkqubo zeshishini. Ukutshisa la mafutha kubangela umsi, imvula eneasidi kunye nokukhutshwa kwegesi eluhlaza.
Amazwe atyebileyo nge-oyile yaku-Mbindi Mpuma alawula ezona ndawo zilishumi ziluluhlu lwezona zixeko zingcolisekileyo. Ezi zixeko zifumaneka:
I-Saudi Arabia, inqanaba lomcimbi wenqanaba le-108.
I-Qatar, inqanaba lomba wenqanaba le-103.
I-Egypt, inqanaba lomba wenqanaba lama-93.
I-Bangladesh, inqanaba lomba wenqanaba lama-84.
I-Kuwait, inqanaba lomba wenqanaba lama-75.
ECameroon, inqanaba lomcimbi wamasuntswana angama-65.
Inqanaba lemicimbi yamazwe aseMauritania angama-65.
I-Nepal, inqanaba lomba wenqanaba lama-64.
I-United Arab Emirates, inqanaba lomcimbi wenqanaba lama-64.
I-Indiya, inqanaba lomcimbi wamasuntswana angama-62.
I-Libya, inqanaba lomba wenqanaba lama-61.
I-Bahrain, inqanaba lomba wenqanaba lama-60.
I-Pakistan, inqanaba lomcimbi wamasuntswana angama-60.
INiger, inqanaba lomcimbi wamasuntswana angama-59.
I-Uganda, inqanaba lomba wenqanaba lama-57.
I-China, inqanaba lomcimbi wamasuntswana angama-54.
IMyanmar, inqanaba lomba wenqanaba lama-51.
I-Iraq, inqanaba lomba wenqanaba lama-50.
IBhutan, inqanaba lomba wenqanaba lama-48.
Oman, inqanaba lomba wenqanaba lama-48.
I-United Kingdom ibekwe kwindawo ye-159 kuluhlu olunamanqanaba amasuntswana ali-12. I-USA linikwe indawo ye-173, nenqanaba eliphantsi kakhulu le-8.
The imephu interactive ikwabonisa ukuba amazwe afana ne-China, adume ngokungabikho komoya ococekileyo ngaphakathi kwezixeko zabo, angcolisile amanqanaba omoya ayi-HALF yesixa se-Saudi Arabia. I-China ifumene inqanaba lama-54 xa kuthelekiswa ne-Saudi Arabia eyoyikisayo yamasuntswana omba we-108. I-Saudi Arabia ngoyena mntu uphule umthetho kwezona ndawo zixananazileyo zesixeko.
Amathuba okuba nesifo sentliziyo, umhlaza kunye nokufa icala kuphakanyisiwe kwiindawo ezinongcoliseko oluphezulu kwaye izifundo zibonisa ukuba amazinga okusweleka kwabantwana aphezulu kumazwe anongcoliseko lomoya olukhulu. Ngokwe- Umbutho WezeMpilo Wehlabathi (WHO), ungcoliseko lomoya ngoku lusisisongelo esikhulu kwezempilo kune-Ebola okanye i-HIV kwaye i-80% yazo zonke iindawo ezisezidolophini zinamanqanaba ongcoliseko lomoya ngaphezulu komnqwazi athathwa ngokuba asempilweni.
Ayisiyo yonke intshabalalo kunye nesithokothoko, omnye womoya ococekileyo emhlabeni ngowaseNew Zealand, kwiiSolomon Islands, eKiribati naseBrunei Darussalam, abathi bonke baqhayise ngenqanaba elinomtsalane lezinto zamasuntswana ezi-5.
Ngolwazi oluthe kratya ngeZona ndawo zixhaphakileyo kwihlabathi, ungandwendwela: www.ecoibongo.com.
Bruneyi Brunei Darussalam izakhiwo ibhasi Khameruni iphulo umhlaza Umntwana imizi coca izifo umhlaba imini yomhlaba asempumalanga Ebola Egypt umbane Emirates ukukhutshwa amandla gesi ukukhutshwa kwegesi YAYA! luhlaza kuluhlaza ukukhutshwa kwegesi Gulf Ummandla weGulf isiqingatha unalo impilo enempilo HIV amashishini Nziswano Irakh iziqithi ukujoyina ubukumkani Kiribati Khuweyithi ukuswela inkokheli Libhiya uluhlu low okuphambili yokuvelisa imephu kungakhathaliseki Morithaniya Ephakathi Myanmar Nephal Nyu Zilend ioyile Oman Phakistan ngco liseko inkinga Khwatha uphawu imvula amazinga nciphisa ehlaziyekayo umoya ovuselelekayo Revolution Sityebi Saudi ISaudi Arabia. ( ibonisa Ongatshatanga yelanga Isiqithi saseSolomon izifundo kwiNxweme usongo eliphezulu yothutho uthutho ukhenketho nokhenketho Ohambahambayo Uganda IUnited Arab Emirates iunited Kingdom edolophini i-USA ezisetyenzisiweyo kunazo